Dowlada Eritrea Oo Maraykanka Ku Eedaysay In Uu Sii Hurinayo Colaada Gobolka Tigreyga – Borama News Network
Dowlada Eritrea Oo Maraykanka Ku Eedaysay In Uu Sii Hurinayo Colaada Gobolka Tigreyga
Dowladda Eritrea ayaa waxa ay dhiggeeda Mareykanka ku eedaysay colaadda haatan ka taagan gobolka Tigray ee waddanka Itoobiya.
Warqad uu wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Eritrea, Cismaan Saalax, u diray Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, ayaa waxa uu ku eedeeyay Mareykanka “inuu sii hurinayo colaadda iyo deganaanshiyo la’aanta” uuna qorshaynayo “inuu badbaadiyo haraadiga” maamulka Ururka Xoraynta Dadka Tigray (TPLF), kaas oo maamuli jiray gobolkaasi waqooyiga Itoobiya ku yaal.
Mareykanka ayaa waxa uu ku baaqayay in ciidammada Eritrea ay isaga baxaan gobolka Tigray kaddib markii lagu eedeeyay inay halkaas ka gaysteen tacaddiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
Warqadda Mr Cismaan ayaanan looga hadlin ciidammada Eritrea ee ku sugan gudaha gobolka Tigray ee waddanka Itoobiya.
Dowladda Itoobiya ayaa hore u diidday in ciidammada Eritrea ay joogaan gudaha gobolka Eritrea hasayeeshee markii dambe ayaa waxa ay qirtay arrintaasi iyadoo ballanqaadday inay halkaas isaga bixi doonaan.
Dowladda ayaa todobaadkii tagay waxa ay shaacisay farriin noocaas oo kale ah.
Hay’adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa waxa ay ka digeen in dhibaato bini’aadamnimo ay gobolkaasi ka soo food leedahay, iyadoo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Gutteres uu sheegay in Tigray “ay qarka u saaran tahay macaluul”.
Dhanka kale boolis ku sugan degmo ku taalla Gobolka colaadda ay ka taagan tahay ee Tigaray ayaa BBC-da u sheegay inay halkaasi cunno la’aan ka jirto sidaas darteedna qofkasta oo deegaankaasi ku nool wuxuu qarka u saran yahay macalluul.
Dadka degmada Qafta Humera oo ku taalla miyga fog ayaa sheegay in rag hubaysan ay cuntadoodii iyo xoolahoodiiba ka dheceen.
Waxay sheegeen in xitaa ay arkeen gawaari ay saaran yihiin raashin mucaawino ah balse aanay dhag jalaq u siinayayn inay istaagaan oo caawiyaan dadkan tabbaalaysan.
Dadka qaar ayaa waxay isku dayeen inay gaaraan magaalada ugu dhaw ee Shire, haseyeeshee waa ay u suurogeli weysay sababo la xiriira baraha kaantarool ee ay sameeysteen kooxaha iska soo horjeeda, waa ciidamada Itoobiya iyo xoogagga daacada u ah maamulkii hore ee gobolka Tigray.
Waxay ay dowladda iyo hay’adaha gargaarka ka codsanayaan inay si deg-deg ah u caawiyaan.
Guddiga xuquuqda aadanaha Itoobiya ayaa bilo ka hore sheegay in askar Eritrea u dhalatay ay dad rayid ah oo tiradoodu ka badan tahay boqol qof ku laayeen magaalada Aksum ee gobolka Tigray dhammaadkii Nofeembar.
Baaritaanka uu guddiga sameeyay ayaa salka ku hayay warar sheegaya in dhammaadkii Nofeembar ay magaaladaasi qadiimiga ah ka dhaceen falal noqon kara dembiyo dagaal.
Raysal Wasaare Rooble Oo Magacaabay Gudi Cusub Iyo Shaqada Ay Qabanayso Gudigaasi
“Inigu Isku Maan Soo Sharixin In Aan Ahaado Xubin Gole Deegaan” Xildhibaan Cabdikariin Axmed Mooge
Dowladaha Soomaaliya Iyo Turkiga Oo Ka Wada Hadlaya Tayeynta Ciidanka Millateriga Somaliya
Bnnstaff Bnnstaff November 22, 2021
Dowlada Hindiya Oo Cabsi Xoogan Ka Muujisay In Ay Taliban Soo Faragaliso Gobolka Lagu Muransayahay Ee Kasmiir
Bnnstaff Bnnstaff September 14, 2021
Xaalada Magaalada Muqdisho Oo Caawa Kacsan Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay